संघीय सरकारको छायामा प्रदेश सरकार पर्यो : केशव पाण्डे (अन्तरवार्ता) - Dainik Online Dainik Online
नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक राजनीतिको असर प्रदेश सरकारहरुमा देखिएको छ । बैशाख १५ गते बुधबार बागमति प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभयो र नेकपा एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केशव पाण्डे आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री बन्नुभयो । न्यूज एजेन्सी नेपालले नवनियुक्त आन्तरिक मामिला मन्त्री पाण्डेसंग कुराकानी गरेको छ । संघीय राजधानी रहेको प्रदेश भएकोले प्र्रदेश सरकारले गरेका धेरै राम्रा कामहरु छायाँमा परेको मन्त्री पाण्डेले बताउनुभएको छ । कुराकानीमा मन्त्री पाण्डेले बढ्दो कोभिड संक्रमण रोक्न र संक्रमितको उपचार गर्न संघीय सरकार संग मिलेर काम गर्ने बताउनुभयो । प्रस्तुत छ,मन्त्री पाण्डेसंग न्यूज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानी ।
विषम परिस्थितिमा मन्त्री बन्नुभएको छ । के छ तपाईको योजना, कसरी काम गर्नुहुन्छ ?)
मैले सुरक्षा समितिको बैठकमा यसै विषयमा छलफल गरेको छु । हामीले सामाजिक विकाश मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको बीचमा समन्वय गरेर काम गर्ने गरि गृहकार्य सुरु भएको छ । छलफलमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । अप्ठेरो परेको विषय सरकारलाई भन्न आग्रह गरेको छु । कहाँ ? के सेवा सुविधा चाहिन्छ भन्नुहोस् भर कोभिड विरुद्धका कुनै काम पनि नरोक्न निर्देशन दिएको छु । बैठकमा सहभागी नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीले आफ्नो कमाण्डमा रहेका सेनाका स्वास्थ्य अधिकृत कर्मचारी उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता दिनुभएको छ । यस्तै सीमा हेर्ने शसस्त्र प्रहरी बलले सीमा नाकामा अवैध आवतजावतको समस्या देखाएको छ । यसलाई समाधान गर्न छिमेकी प्रदेशका सरकारसंगको समन्वयमा काम गर्ने योजना बनाएको छु । यसले नाकाहरुबाट हुने सबै क्रियाकलाप रोकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु । पूर्व पश्चिम राजमार्गको आवतजावत अहिले पनि रोकिएको छैन ।
कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न यसले केही जटिलता थपेको छ । यसलाई सुरु विन्दुमा नै रोक्न समन्वय गर्न आवश्यक देखेको छु । सामाजिक विकाश मन्त्रालयसंग छलफल गरेर एम्बुलेन्स, आइसोलेसन वार्ड, आईसियु थप्ने विषयमा योजना बनाएर कम थाल्न लागेको छु । प्रदेश सरकारले कार्म नगरेको होइन । कोभिडको समयमा अघिल्लो बर्षदेखि अहिलेसम्म सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक , नुवाकोट र हेटौडाका अस्पालहरुमा २५, ५० र १ सय बेडको पूर्वाधार हेरेर स्तरोन्नती गरेका छौ । यी अस्पतालहरुमा अत्यावश्यक सेवाका लागि आईसियु, एचडियु, भेन्टीलेटर लगाएतका सुविधा राखिएको छ । यसका साथै प्रदेश भित्रका सबै जिल्लास्तरीय कोभिड संक्रमण तथा रोकथाम समिति (डिसिसिएमसि) लाई आवश्यक सबै विषय सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताएको छ । यति मात्र हैन स्थानीय तहहरुलाई पनि आवश्यक कुरा माग्न भनेका छौ । काठमाण्डौ उपत्यकाका बाहेकका जिल्लाहरुमा गतबर्षको भन्दा राम्रो कम भईरहेको छ ।
प्रदेश शुन्यबाट सुरु भएको हो । अहिलेको अवस्थामा आईपुग्दा गर्व गर्नुपर्छ । देशैभरिका अस्पतालहरु मध्यमा अघिल्लो बर्ष धुलिखेल अस्पताल यो बर्ष त्रिशुली अस्पताल देश भरिमा उत्कृष्ट रह्यो । यो प्रदेशलाई सुम्पिएका अस्पताल हुन् । यसको सेवा सुविधाबाट जनता सन्तुष्ट छन् । जनताको पहिलो उपचार त्यही अस्पतालबाट हुने र सकेसम्म रिफर गर्नुपर्ने अवस्था आउनै नदिने योजनाको साथ तयारी गर्दैछौ । यस्तै प्रदेश भित्रका जनतालाई भ्याक्सीन लगाउने विषयमा पनि आन्तरिक कामहरु भइरहेका छन् । स्थानीयस्तरमा बनेको स्काउट समितिहरुलाई पनि परिचालन गर्ने गरि तयारीहरु गरिरहेका छौ । स्वास्थ्यमन्त्री रहनुभएका भानुभक्त ढकालले संक्रमितहर होम आईसोलेसनमा बस्न सक्छन् भन्दा धेरै आलोचना र विरोध भयो । अहलिे सकेसम्म होम आइसोलेसनमा बस्न चाहन्छन् । व्यवस्थित होम आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन र भ्याक्सिनको तयारीमा सरकार लागेको छ । तर प्रदेश देखिने विषय संघीय सरकार यह भएकाले प्रदेश सरकार र यसले गरेका कामहरु छायाँमा परेका छन् । तर अरु प्रदेशसंग तुलना गरेर हेर्दा हामी पछाडी छैनौं । यस्तै कृषिउपज अन्न, फलफूल, तरकारी, अण्डा, मासु लगाएतका क्षेत्रमा विस्तारै आत्मनिर्भर बन्दै गएका छौ ।